Zvisiri-purofiti: Cloud-Yakavakirwa Fundraising 3.0 neBloomerang | Martech Zone
Zvisiri-purofiti: Cloud-Yakavakirwa Fundraising 3.0 neBloomerang
Chitatu, October 2, 2013 Muvhuro, June 8, 2015 Douglas Karr
Asingabatsiri mupiro manejimendi manejimendi yakagara yakamisikidzwa mu drab UI, yakashata UX uye yakakwira mitengo. Bloomerang iri kuvhura script. Co-yakavambwa mu2012 ne30-gore risingabatsiri chikamu uye tekinoroji veteran Jay Rudo, ivo gore-based fundraising software inobatsira isingabatsiri kugadzirisa yavo puru yevanopa.
apo Bloomerang inozvitsauranisa pachayo inotarisa kuchengetedza kwevanopa. Nepo mapurogiramu mazhinji asingabatsiri software achibvumidza vafundisi kukumbira uye nekupa zvipo, Bloomerang zvakare inogonesa maitiro akanakisa ekuchengetedza avo vanopa. Kana iwe ukachera mune iyo data, iyo inotarisisa yakajeka zvakajeka. Wepakati avhareji yekuchengetwa kwevanopa isingabatsiri yakatenderedza 40%, zvinoreva kuti kune vese vane chiuru vanopa vakawana mugore rekutanga, mazana mana chete ndivo vanopa rwechipiri mupiro. Izvo zvinosvika kune yakawanda yakarasika mari yemasangano anobatsira.
Kana mushandisi akatanga kupinda, yavo yazvino mwero wekuchengetwa kwevanopa Ndicho chinhu chekutanga chavanotaura, kuchichengeta chiri pamusoro pendangariro kune wese fundraiser uyo anoshandisa software. Bloomerang zvakare teedzera wega mupi wemubatanidzwa, zvichikuratidza pa-e-kutarisisa kuvimbika kwakaita mupi zvechokwadi. Fundraisers vanogona kutarisa kune avo vane hutsinye vateveri kana kuitazve avo vakasiya. Imwe nyika yekumaka uye dhizaini dhizaini yakagadzira iyo interface, inomiririra yakakosha uye inogamuchirwa kubva kune zvisingawanzo-kuvandudzwa, menyu-based interfaces anowanikwa pakati penzvimbo zhinji dzekutsigira mari.
Yakasarudzika kubatana kwenhau inobvumira vashandisi kuisa maakaundi enhau enhau evanopa vavo uye kutaurirana navo kuburikidza nechavo vakasarudzwa chiteshi. Shanduro dzapashure dzeiyo software dzinozokonzeresa zvemagariro midhiya kubatanidzwa mune yemubhadharo yekuita chikamu. Mune mamwe mazwi, retweets, kufarira uye migove yezvako zvisingabatsiri zvemukati zvinopinda muBloomerang.
Bloomerang irikutsvaga idiki-kusvika-pakati-saizi saizi isingabatsiri kushandisa yavo software.
Tags: echakomutsaZvipodonor manejimendi manejimendifundraising softwarejay rudozvisingabatsiriAsingabatsiri mupiro manejimendi manejimendi
Twazzup: Yechokwadi-Nguva Yekutarisa ye Twitter
LucidPress: Kubatsirana Pamhepo Dhinda & Dhijitari Kudhinda